Mootummaan Hindii Seera Addunyaa Cabsee Jira: mummicha ministeera Paakistaan
Hagayya 06, 2019
Kutaa wal falmisiisaa ta’e Kaashmir irratti tarkaanfii mootummaan Hindii fudhateef gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummotaa dabalatee qaamonni addunyaa irra jiran dhaqqabuu qabna jechuun Mummichi ministeera Paakistaan Imran Khan dhaadatanii jiru.
Kunis Mootuummaan Hindii mirga addaa kutaa Kaashmiriif kennemee ture irraa mulqamuu isaan ture.
Hindiin bara 1949 kutaa Jammu fi Kaashmir akka of bulchan , heera ofii fi alaabaa addaa akka qabaatan akkasumas dhimmi haajaa alaa, kan ministeera ittisaa fi kan qunnamtiin ala kan hin dabalannee ta’u labasa.
Jarreen Hinduu kan keessatti heddumaatan mootummaan Hindii seera mirga heerri Kaashmiriif kennee ture kana wiixata kaleessaa haqee jira.
Mummichi ministeera paakistaan Imran Khan paarlaamaa ofii walgahii hatattamaa waamuun tarkaanfiin Hindii kun lootee seentummaa kutaa musleemonni itti heddumaatan kan kaashmir keessaa hammeessa jedhan.
Muddamnii uumamuuf jiru biyyoota Nukleera qaban Hindii fi Paakistaan giddutti waraana biroo kaasisuu mala jedhan.Walitti bu’iinsii uumamuuf jiru dhuma irratti biyyoota lameen gara meeshaa Nukleeraan walitti ba’u waan fiduuf jecha addunyaan waan hamaa akkasii arguuf qophiidhaa jechuun gaafatan.